कपिलको ‘कमब्याक’ तर... - मनोरञ्जन - नेपाल
भनिन्छ, सफलता कमाउनभन्दा बचाउन मुस्किल हुन्छ । ठ्याक्कै यस्तै भयो, कपिल शर्माको हकमा ।
पञ्जावको सामान्य परिवारमा जन्मिएका कपिल भारतको सबैभन्दा रुचाइएका कमेडियन बने । जब कर्लस टेलिभिजनमा कमेडी नाइट वीथ कपिल सुरु भयो, उनको लोकप्रियता शाहरुख खानसँग तुलना गरियो । हुन पनि, हरेक ठूला सेलिब्रेटी उनको शोमा पाहुना बन्न चाहन्थे, फिल्म प्रमोशन गर्ने लोभ राख्थे । सन् २०१६ मा उनलाई फोब्र्स म्याजिनले भारतको उत्कृष्ट ११ सेलिब्रेटीमा राख्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरु गरेको स्वच्छ भारत अभियानको सद्भावना दूतमा छानिए । किस किसको प्यार करुँ ? मार्फत फिल्ममा फड्को मारे, हिट भयो । त्यसपछि त कपिललाई कस्ले छुन सक्नु ? साँच्चै उनको ख्यातीको रफ्तार ट्रेनझैं तुफान भयो ।
तर एक्कासी कलर्स टेलिभिजनको व्यवस्थापन समूहसँग मनमुटाव भयो । टेलिभिजन छोडिदिए । उनको क्रेजका बारेमा जानकार सोनी टेलिभिजनले निम्तायो । र, कपिलले सोनीमा द कपिल शर्मा शो सुरु गरे । नाम पनि कमाइरहेका थिए, दाम पनि । सबथोक उनकै पक्षमा थियो । एकाएक खबर आयो, शोका खम्बा मानिएका चर्चित कलाकार सुनील ग्रोभरसँग उनको लफडा भयो । विदेशको कार्यक्रमबाट फर्कदा फ्लाइटमै कपिलले सहकर्मी सुनीललाई दुव्र्यवहार गरेछन् । डाक्टर गुलाटीको भूमिकामा काफी चर्चा कमाएका सुनीलले शो छोडे । अलि अस्गर र चन्दन प्रभाकर पनि टाढिए । त्यहीबाट सुरु भयो, कपिलको पतन ।
सुनील विनाको द कपिल शर्मा शोको ‘टीआरपी’ ह्वात्तै घट्यो । सामाजिक सञ्जालमा कपिलको चर्को आलोचना भयो । उनले माफी मागे तर सुनील फर्किएनन् । बिस्तारै डिप्रेसनले सताउन थाल्यो, कपिललाई । शोमा निम्ताएका पाहुनालाई लामो समय कुराउन थालेपछि सोनीले शो बन्द गरिदियो । त्यसको केही समयमा उनको लगानी र अभिनय रहेको फिल्म फिरंगी पुरै डुब्यो । अर्थात, कपिल ओरालो लागेको–लाग्यै । तैपनी फेरि सोनी टिभीमा झुल्किए, फ्याम्ली टाइम वीथ कपिल लिएर । तर शोले ‘पिकअप’ लिन सकेन । आधा दर्जन एपिसोड प्रशारण नहुँदै यो शो पनि बन्द भयो । कपिल पनि गायब ।
फिल्म र टेलिभिजनमात्र होइन, कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएनन् कपिल । त्यसैले उनी मनोरञ्जनको दुनियाँबाट सदाका लागि टाढा भएको हल्ला चल्न थालेका थिए तर फेरि झुल्कने भएका छन्, सोनी मै । उनको आग्रह पछि सोनीले नयाँ शो बनाउने घोषणा गरेको छ । टिजर सार्वजनिक भइसक्यो । सुनीलको उपस्थितीबारे सोनी टिमले केही खुलाइएको छैन तर शो सुरु नहुँदै सवाल उठ्न थालेको छ, कपिलको ‘कमब्याक’ दमदार होला वा फेरि गुमनाम होलान्, अघिल्ला पटकझैं ?
प्रकाशित: मंसिर १७, २०७५